Ungayifaka kanjani i-WhatsApp kwi-PC | Kusuka kuLinux
Ungathanda ukukwazi sebenzisa WhatsApp kukhompyutha yakho kepha awazi ukuthi ungayilanda kanjani? Faka i-WhatsApp ku-PC Kulula kakhulu! Vele ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo futhi uzokwazi ukujabulela uhlelo lokusebenza kokubili kudeskithophu yakho naku-laptop yakho.
Izidingo eziyisisekelo ukuze ukwazi ukusebenzisa i-WhatsApp kukhompyutha yakho:
Ikhompyutha, elungisiwe noma ephathekayo, ene-Windows operating system.
1 Ungayifaka kanjani i-WhatsApp ku-PC yakho
2 Ividiyo mayelana nokuthi uyifaka kanjani i-WhatsApp ye-PC
Ungayifaka kanjani i-WhatsApp ku-PC yakho por ukhaphethi
Yize kunezindlela ezimbalwa zokusebenzisa uhlelo lokusebenza, okudume kakhulu futhi okulula ukusebenzisa iBlueStacks.
Isinyathelo 1: Landa i-BlueStack (isicelo samahhala seWindows)
Landa iBlueStack yeWindows
Isinyathelo 2: Ngemuva kokuqeda ukulanda, yenza qhafaza kabili kufayela elilandiwe. Ngemuva kwalokho, cindezela inkinobho Qhubeka. Ukuqedela, chofoza ku Faka.
Isinyathelo 3: Ngemuva kwalokho, landa ifayela le-WhatsApp APK.
Landa ifayela le-WhatsApp APK.
Isinyathelo 4: Ngemuva kokuqeda ukulanda ifayela, chofoza kabili kuso.
Isinyathelo 5: ngemuva kwalokho, izofakwa WhatsApp kukhompyutha yakho.
Isinyathelo 6: Ngemuva kwalokho abrfuthi BlueStacks (indlela esheshayo ukucindezela kabili kusinqamuleli esizobe sakhiwe kudeskithophu yakho)
Isinyathelo 7: Manje ku BlueStacks >> Chofoza Izinhlelo zami zokusebenza.
Isinyathelo 8: Kulolo hlu uzobona isithonjana WhatsApp >> Chofoza kuso.
Isinyathelo 9: Yamukela imigomo nemibandela abayiphakamisayo. Kufanele ubheke ukubona ukuthi uzizwa ukhululekile yini ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa uhlelo lokusebenza.
Isinyathelo 10: Faka inombolo yocingo ofuna ukuyisebenzisa. Khumbula! Ngeke ukwazi ukusebenzisa izinombolo esezivele zine-akhawunti ye-WhatsApp ehambisanayo.
Qaphela: Kufanele ufake ikhodi yezwe lakho ngaphambi kokuthayipha amadijithi ayisishiyagalolunye weselula yakho. Endabeni yeSpain, +34.
Isinyathelo 11: Manje iWhatsApp izozama ukuqinisekisa inombolo yakho, kepha kuzovela umyalezo wephutha.
Isinyathelo 12: Manje chofoza Ngibize >> Ngemuva kwalokho, chofoza ku- "Call me" (noma Ungishayela, kuya ngohlobo). Uzothola ucingo oluzenzakalelayo olunenombolo yokuqinisekisa. Khumbula ukugcina leyo nombolo! Sincoma ukuyibhala ephepheni noma kufayela leZwi.
Isinyathelo 13: Manje, vele uthayiphe inombolo etholiwe enkambeni yokuqinisekisa futhi yilokho kuphela!
¡Disfruta de I-WhatsApp yekhompyutha, ilaptop noma ideskithophu!
Ividiyo mayelana nokuthi uyifaka kanjani i-WhatsApp ye-PC
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Ungayifaka kanjani i-WhatsApp ku-PC yakho
Amazwana ayi-6, shiya okwakho
Ngifuna ukulanda i-whatsapp ye-pc yami
Masibone ukuthi le yibhulogi ye-linux, uma lokhu kusebenza kuphela ewindini lokuthi uyithumele ?????
«KUSUKA KU-LINUX» ...
URebecca Daniela kusho
Ngikulanda kanjani uma kungenxa yomoya hhayi we-linux
Phendula uRebeca Daniela
sina? Ayisetshenziswanga ukuyilanda ku-Linux, kufanele ukuthi ikwazi ukuyifaka ku-Linux futhi baphume nalolo sakaza lwe-slime olwe-Windows -.-
Ngiyaqonda ukuthi abafuni ukuba ngama-Windows Haiters, kepha njengoba besho le bhulogi ivela eLinux, uma befuna ukuyenza kepha kuzo zombili izinhlelo zokusebenza zokuhlalisana okuhle
Omakhalekhukhwini be-Zuum noma be-ZTE